Aaladda Auto Belay ee loogu talagalay fuulista & madadaalada | Nidaamyada Soo Fuulista Dhammaystiran
Wadista tooska ah
Soo hel Reseller
Ku Saabsan Gawaarida Gawaarida
Adeeg & Xaqiijin
Naqshadeynta Neefsashada Laba-Geesoodka ah
Ka noqoshada xad dhaafka ah ee loogu talagalay kalsoonida iyo cimri dherer
Ciyaaraha PD® Sean McColl ayaa la wadaagaya sheekadiisa Olimbikada
Shahaado ka qaatay Max
Ku guuleysiga heerka ugu sarreeya ee imtixaan iyo shahaado
La kulan lamaanahaaga cusub ee fuulista
Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah ayaa gacmo lagu dhisay gudaha USA waxaana lagu caddeeyay heerka ugu sarreeya adduunka. Soo bandhigida aluminium iyo birta-birta-birta ah si loo ilaaliyo saxnaanta qaybaha gudaha. Dhismaha miisaanka fudud iyo isafgarad, kalsoonida, iyo qiimaha yar ee lahaanshaha ayaa ah dhowr ka mid ah sababaha PD® ay u tahay doorbidka gawaarida gawaarida jimicsiga, xeryaha, iskuulada iyo jaamacadaha, koorsooyinka caqabadaha ee ninja, iyo xarumaha madadaalada qoyska. La tijaabiyey oo la caddeeyey 10x EN 341: 2011 Class A., oo matalaya shuruudaha ugu badan ee shahaado ee qalabka mashiinnada madadaalada madadaalada.
Muuqaalo Cajiib ah.
LAGU SAMEEYO & AAMIIN
Waxaa lagu tijaabiyay 10x EN 341: 2011 Fasalka A oo waxaa kujira aluminium waara iyo bir birta ah oo banaanka kajirta isla markaana leh saxan xirmooyin sare oo gudaha ah.
SPRING DUpleX ™
Ka noqoshada xad-dhaafka ah ee soo bandhigaysa PD®'s gaar ah Duplex Spring Design ™ looguna talagalay kalsoonida iyo cimri dhererka.
DHISMAHA UGU FUDUD
Si fudud loo koriyo, loo dhaqaaqo, loona maamulo dhererka oo ka raqiisan in loo raro adeeg iyo dib u xaqiijin.
KHARASHKA LACAG LA'AAN
Qiimaha heerka gelitaanka, khidmadaha dib-u-xaqiijinta sanadlaha ah, oo aan lacag laga qaadin adeegyo qarsoon, iyo qaybaha muddada-dheer soconaya ayaa macnaheedu yahay keydka lacagta nolosha oo dhan ee milkiilayaasha.
TARTANKA OO LOO BAARAY
Waxaa u adeegsaday kooxaha iyo ciyaartooyda ugu sareysa adduunka oo dhan iyo walxaha ugu horreeya ee loo adeegsado tartanka Koobka Adduunka, taasoo horseed u ah horumar weyn oo xagga nabadgelyada iyo caddaaladda ah.
ISTICMAALKA GUDAHA & GUDAHA
Qaybaha u nugul fasaadka iyo guryaha uxiran waxqabadka muuqda ee gudaha iyo dibedda.
Dhisida qalabka ugu fiican
Toos u wad ™
Hogaamiyaha qiimaha tayo sare iyo waxqabad sare oo otomaatiga ah.
Dib uga noqosho celcelis ahaan heerka 2ft (61cm) ilbiriqsi kasta, taasoo ka dhigeysa xulasho ku habboon fuulitaanka guud, jidadka diirimaadka, saldhigyada fuulitaanka carruurta, iyo dhacdada fuulitaanka.
Soo bandhigida noo gaar ah Duplex Spring Design ™ loogu talagalay isku halaynta iyo cimri dherer.
Si buuxda loogu xiray gudaha iyo dibedda adeegsiga.
Xawaaraha Xawaaraha ™
Belay otomaatig ah oo si dhakhso leh uga noqoshada ayaa dejinaya heerka tayada iyo waxqabadka.
Ka noqoshada danab degdeg ah 15ft (4.6m) ilbiriqsi kasta, Speed ​​Drive ™ ayaa ku habboon xawaaraha fuulitaanka iyo tartanka, jidadka firfircoon, tababarka u dhexeeya, iyo jidadka jir dhiska iyo wareegyada.
Tooska Rasmiga ah ee loo yaqaan 'IFSC fuulitaanka Koobka Aduunka' oo lagu soo bandhigayo noo gaar ah Duplex Spring Design ™.
PD® Auto Belays waxay bixisaa saddex dherer lanyard oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo waxqabadkaaga gawaarida gawaarida iyada oo ku saleysan kor u qaadista. Had iyo jeer xulo lanyard-ka sida aadka ugu dhow dhererka sii kordhaya ee loogu talagalay adoo u dhigma ama ka weyn dherer.
Heerarka sii kordhaya ee u dhexeeya 18ft iyo 28.5ft (5.5m iyo 8.7m)
Heerarka sii kordhaya ee u dhexeeya 26ft iyo 40.5ft (8m iyo 12.3m)
Heerarka sii kordhaya ee u dhexeeya 34ft iyo 53.5ft (10.4m iyo 16.3m)
Xullo Sida Aad Isku Xidhid
Daawaha birta ah, 3-marxaladaha gawaarida gawaarida lagu xiro ee leh isugeyn isku dhafan
Aluminium Anodized, 3-marxaladaha gawaarida gawaarida lagu xiro ee leh isugeyn isku dhafan
Tartan iyo Amni
Laba, 3-heer carabiners auto-qufulka la lafta eeyga tolay iyo swivel isku dhafan
Isku xidhka isku xirayaasha
Xoog buuxa oo loo tolay loop oo ku habboon isticmaalka noocyada isku xirnaanta ee idman
Shan Tayo Xidig
Waxaa jecel ciyaartooyda, milkiileyaasha ganacsiga, iyo kuwa jecel fuulitaanka
Wax soo saarka weyn xitaa kooxda taageerada ka fiican
Wax soosaarka weyn xitaa kafiican kooxda taageerida "The Perfect Descent auto autolays ayaa markasta daboolaya baahidayda shaqalaha Arial Adventure-na way i caawiyeen sifiicanna waa loo wargaliyay markasta oo aan u baahdo taageero macaamiil Nuux B. 19 Agoosto 2020
Nuux B. Agoosto 19th, 2020
Kaamil kaamil ah ayaa ka dhigi doonta farac kaamil ah
Tayada Gawaarida Gawaarida Sare Laheli Karo. Si Aad Ah Ugu Talin.
Mike L. May 9th, 2019
Gawaarida gawaarida 2.0
Tani waa iskuxirka gawaarida mustaqbalka. Waxaan jecel nahay sheyga.
Kellen D. markay ahayd Juun 19th, 2019
Isticmaal weyn oo jimicsi fuulaya!
Qalabka Wonderfull iyo adeegsiga fudud.
Maurice D. markay ahayd May 6th, 2020
Qalabka noocan ah ee loo yaqaan 'auto belay' waxaa loogu talagalay derbiga cagaha 22 oo si fiican ayuu u shaqeeyaa. Looma baahna qof in uu i dilo! Waxay dareemeysaa mid aad u ammaan badan oo lagu kalsoonaan karo oo ay fududahay in loo dejiyo ujeedooyinkeyga. Waxaan ku iibsaday mid 2aad qeyb kale oo gidaarkayga ah!
Steve W. Janaayo 28th, 2020
Baro Barnaamijka Maareynta Gawaarida Gawaaridaada
Diiwaangelinta Alaabtu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah maareynta baalasha gawaarida waxayna dejisaa rikoor hore oo sax ah oo loo isticmaalo inta lagu jiro adeegga qalabka. Noqo kan ugu horreeya ee hela beta muhiim ah oo ku saabsan cusbooneysiinta badeecada, wararka iyo dhacdooyinka, xayeysiisyada farsamada, iyo dalabyada gaarka ah.
Soo gal buugyarahayaga kala duwan ee alaabta Ingiriiska iyo ajaanibta iyo hawlgallada. Soo dejiso dukumiintiyada ugu badan ee loogu talagalay moodeelka 220 iyo 230 gawaarida gawaarida, baadhitaanka guplex ™ kormeerka iyo buugaagta bedelka lanyard, tilmaamaha nadiifinta iyo jeermiska, iyo inbadan.
Wax badan ka hel barnaamijkaaga maaraynta PD® oo leh macluumaad kooban oo qoto dheer oo ku saabsan rakibidda, daryeelka, iyo howlaha. Baadh istiraatiijiyado cilad-bixinno guud ah, akhri shuruudaha kormeerka soo-saaraha, oo soo hel tilmaamaha lagu maareeyo is-beddelka gawaarida.
Heerarka EN ayaa baarka u dejinaya badbaadada wax soo saarka, isku halaynta, iyo tayada. Perfect Descent Auto Belays ayaa la tijaabiyey lana caddeeyey heerka ugu sareeya ee nasashada gawaarida madadaalada ee 10x EN 341: 2011 Fasalka A. Arag oo soo deg Baaqa ugu dambeeyay ee Shahaadaynta iyo Imtixaanka Imtixaanka.
Tilmaamaha Waxsoosaarka Dhamaystiran
La soco Taariikhda
© 2021 Nidaamyada Fuulista Dhamaystiran. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay